High Glossy Laminate Surface
Tharaphee(သရဖီ) Laminated Floor &amp; Luxury Vinyl Plank (၈) နာရီ ရေစိုခံနိုင်သည်။Luxury Vinyl Plank ၁၀၀%ရေစိမ်ခံနိုင်သည်။ အလွယ်ကူခြစ်ရာပွန်းရာမထင်နိုင်ပါ။ဖိအားဒဏ်လည်း ခံနိုင်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ရေရှည်ခံနိုင်သည်။ မီးဒဏ်ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ခံနိုင်သည်။ ဖြုတ်တပ်ရလွယ်ကူသောကြောင့် အခြားနေရာတွင် ပျက်စီးခြင်းမရှိပဲ ပြန်ခင်းနိုင်သည်။ လုကြီးမင်းတို့ကုန်ကျသွားသော ငွေ ပမာဏ နှင့် ထပ်တူညီသော Quality စစ်မှန်မှုအတွက် Tharaphee မှ စက်ဖြင့် အခမဲ့စမ်းသပ်ပေးပါသည်။Skirting &amp; Accessories ကို Floor ခင်းသည့် Area အတွက် လိုအပ်သလောက်အသုံးပြုပေးသည်။မည်သည့်အပိုမှထပ်ပေးစရာမလိုပါ။150,000Kyats to 255,000 kyats(တစ်ကျင်းလျင်)(၁၀၀ စတုရန်းပေလျင်) လှေခါး တွင်ခင်းနိုင်ပါသည်။AC2rating 8mm တစ်ကျင်း(၁၀၀ စတုရန်းပေ)၁၅၀၀၀၀ ကျပ်(တစ်ကျင်း လျင် ၃၈ ချပ်)
Workability: Blocks can be easily cut, drilled, nailed, milled and grooved to fit individual requirement. It’s also available in custom sizes subject to negotiation. Moisture Resistance:	AAC blocks resist with moisture. Because AAC blocks has very less water absorption compare to other bricks. Water Saver:	Water require property is very good .In construction require less water compare to clay brick and other traditional bricks during curing; plastering and laying process. Less Weight: AAC Bricks has 1/3 density compare to clay bricks. Hence AAC Bricks is very light weight material. Acoustically Absorbent And Environmentally Friendly: AAC Blocks provide excellent sound insulation millions of Air bubbles react with waves. So, AAC Block have highly sound transmission properties these blocks are preferred in construction of flat systems, hotels, IT offices, recording studios, multiplexes etc. Pest Resistant: With solid wall construction and finishes which bond to the wall there are fewer cavities for insets or rodents to dwell in. Termites and ants do not eat or nest in AAC Block. *Special sizes required by customers shall available subject to negotiation. (Easy to Use, Quick Installation, Reduce the Price and Good Quality.) အရည်အသွေးမြင့် ပေါ့ပါးသော ကွန်ကရစ်ဘလောက် (AAC Block) များသည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ/ခေတ်မှီစက်ကြီးများဖြင့် အင်းစိန်မြို့ နယ်တွင် ဂုဏ်ယူစွာ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ AAC block များသည် တင့်သင့်သောဈေးနှုန်း၊ ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး၊ ပေါ့ပါးခိုင်ခံ့မူကြောင့် လျှင်မြန်သောတည်ဆောက်မှုကိုရရှိပါသည်။ ထို့ အပြင် ထုတ်လုပ်သုံးစွဲမှုသက်တမ်းတလျှောက် စွန့် ပစ်ပစ္စည်းမရှိသဖြင့် လူနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ သက်တမ်းကြာရှည်ခံပါသည်။ အပူဒဏ်ကိုကာကွယ်သည် လေအေးစက်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချသုံးစွဲနိုင်သည် မီးလောင်မှုကို ၇၀၀`C ကို ၄ နာရီကြာခံနိုင်ပါသည်။ အဆိပ်အတောက်မရှိပါ။ အငွေ့ အသက်မရှိပါ။ ဆူညံမူကိုလျော့ချပေးသည်။ ရိုးရိုးအုတ်နီခဲ ( ၁၈ )လုံး နှင့် ညီမျှပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့် အထာကျ ခိုင်ခံ့ ခေတ်မှီသော အဆောက်ဦးကိုရရှိရန် AAC block ဖြင့်တည်ဆောက်ပါ အကောင်းဆုံး အဆောက်အဦး ရရှိရန် လူကြီးမင်းတို့ နှင့် ထပ်တူကြိုးစား ဆောင်ရွက်ပေးနေပါပြီ။
EXCELLENT Roofing အိမ်ခေါင်မိုး
ဒီဇိုင်းဆန်းပြီး လှပ ခိုင်ခံသော အိမ်အမိုးပြားများကို အရောင်အသွေး စုံစုံလင်လင် ဖြင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနေပါသည်။အပူဒဏ် ခံနိုင်ပြီး ပြင်ပမှ အသံများ အထဲသို့ မဝင်နိုင်အောင် တားဆီးပေးသည်။တာရှည်ခံပြီး အသုံးပြုရ ကောင်းမွန်သော အိမ်အမိုးပြားများ ဖြစ်သည်။ခေတ်မှီ လှပပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရောင်လှပပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရောင်များကို ရွေးချယ်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
3666ft Type I Aluminum Step Ladder
<p>Decking Sheet ဟာ နေအိမ်အဆောက်အအုံ ကြမ်းခင်းအတွက် ပိုမိုအသုံးများလာခြင်းကို တွေ့ရှိရပါတယ်။</p><p>2" အမြင့် ကတော့ နေအိမ်များ၊ သံထည်နှင့်ဆောက်သော အထပ်မြင့်အဆောက်အုံများတွင် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။&nbsp;</p><p>3" အမြင့်ကတော့ ဧရိယာကျယ်သော ဂိုထောင်၊ စက်ရုံများတွင် ပို၍အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။</p><p>Gl Z80 ကို အသုံးပြုပြီးသံချေးကိုက်ခြင်း မရှိသောကြောင့် နှစ်ရှည်အသုံးပြုရန် စိတ်ချရပါတယ်။</p><p>Decking Sheet ၏ အားသာချက်များ</p><p>* လွယ်ကူစွာ တပ်ဆင်နိုင်ခြင်း။</p><p>* အချိန်နှင့် လုပ်အားသက်သာခြင်း။</p><p>* ငလျင်ဒဏ်မှ ကာကွယ်နိုင်ခြင်း။</p><p>* ဘေးထွက်အကြွင်းအကျန် မရှိသလောက်နည်းပါးခြင်း။</p><p>* လုံခြုံ၍ အန္တရာယ်ကင်းခြင်း</p>
Tharaphee (သရဖီ) Vinyl Floor
Luxury Vinyl Plank ၁၀၀%ရေစိမ်ခံနိုင်သည်။အလွယ်ကူခြစ်ရာပွန်းရာမထင်နိုင်ပါ။ဖိအားဒါဏ် ခံနိုင်သည်။Luxury Vinyl plank တစ်ကျင်း(၁၀၀ စတုရန်းပေ)၂၅၀၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေး မြိုံ့ အတွက် တစ်ကျင်းလျင် ၁၀၀၀၀ ကျပ် ပိုပါသည်။VINYL FLOOR ကို ထိုင်းနိုင်ငံSTARFLEX မှထုတ် လုပ်ပါသည်။ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် ဆေးရုံ များ ဘဏ်များ Shopping Centre များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ မျက်နှာပြင်များ ကို POLYURETHENE COATING တင်ထာြး ပီးဖြစ်ပါတယ်။Heavy Traffic commercial Area များတွင် အရောင်လွင့်ခြင်း ပျက်စီးသွားခြင်း ၊လုံးဝ မရှိပါ ။Vinyl ကို သာသုံးကြပါသည်။ အလွယ်တစ်ကူပြန်ဖြုတ်နိုင်သည်။စွန်းထင်းခြင်းမရှိပါ ။ အလွန်ပေါ့ပါးသော ကြောင့် အထပ်မြင့် အဆောက် အဦများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။စိုထိုင်းဆများသော အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံ များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ နေအိမ် အဆောက်အဦ များ၊တိုက်ခန်းများ၊ ကွန်ဒိုမီနီယံများ၊ ရုံးခန်းများ ၊ စာသင်ခန်းများ၊ မူကြိုကျောင်းများ၊ကွန်ပျူတာခန်းများ ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊Shopping Centre များ ၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်း များ၊ ခွဲစိတ်ခန်းများ၊ Gym များ အစရှိသောနေရာများတွင် အသုံးပြုကြပါသည်။
4 Angle (အမိုးပြား)
<p>အိမ်ဆောက်မယ်ဆို အမိုးအတွက်စိတ်ပူနေလား ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်မှာ တင်ရောင်းဖို.လက္ကားဝယ်ချင်တာလား ဒါဆိုအရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော4Angle ကာလာသွပ်ပြား&nbsp; ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည် ။<br></p>
Tharaphee(သရဖီ) Laminated Floor
Laminated ၏ Quality ကို AC rating ဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်။ AC rating မဖေါ်ပြနိုင်လျှင် Quality Laminate Floor မဟုတ်ပါ။ Tharaphee Laminate Floor သည် European Producer of Laminated Floor (EPLF) အသိအမှတ်ပြု AC1 မှ AC4 Rating Laminated Floor များကိုသာ တင်သွင်းရောင်းချပါသည်။ Laminate Floor များသည် (၈)နာရီကြာ ရေစိုခံနိုင်သည်။ အလွယ်တကူ ခြစ်ရာပွန်းရာမထင်နိုင်ပါ။ ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်သည်။ AC Rating များကို စက်ဖြင့် စမ်းသပ်မှသာ မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ သိနိုင်ပါသည်.လုကြီးမင်းတို့ကုန်ကျသွားသော ငွေ ပမာဏ နှင့် ထပ်တူညီသော Quality စစ်မှန်မှုအတွက် Tharaphee မှ စက်ဖြင့် အခမဲ့စမ်းသပ်ပေးပါသည်။Skirting &amp; Accessories ကို Floor ခင်းသည့် Area အတွက် လိုအပ်သလောက်အသုံးပြုပေးသည်။မည်သည့်အပိုမှထပ်ပေးစရာမလိုပါ။150,000Kyats to 255,000 kyats(တစ်ကျင်းလျင်)(၁၀၀ စတုရန်းပေလျင်) လှေခါး တွင်ခင်းနိုင်ပါသည်။ AC2rating 8mm တစ်ကျင်း(၁၀၀ စတုရန်းပေ)၁၅၀၀၀၀ ကျပ် (တစ်ကျင်း လျင် ၃၈ ချပ်) AC3rating 8mm တစ်ကျင်း(၁၀၀ စတုရန်းပေ)၁၇၀၀၀၀ ကျပ် (တစ်ကျင်း လျင် ၃၈ ချပ်) AC3 rating 12mm တစ်ကျင်း(၁၀၀ စတုရန်းပေ)၁၉၀၀၀၀ ကျပ် (တစ်ကျင်းလျင် ၃၈ ချပ်) AC3rating 12mm တစ်ကျင်း (၁၀၀ စတုရန်းပေ) ကျပ် (High glossy surface) (တစ်ကျင်းလျင် ၈၆ ချပ်) AC4 rating 12mm. တစ်ကျင်း (၁၀၀ စတုရန်းပေ)၂၅၅၀၀၀ ကျပ်
သေသပ်သော Flooring &amp; Walls
MY HOME ကုမ္ပဏီသည် အရည်အသွေးမြင့်သော ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှတင်သွင်းသောကြောင့် စိတ်ချမူက်ိုပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ အိမ်၊အဆောက်အဦးများကိုသေသပ်လှပ သောနံရံများ၊ကြမ်းခင်းများဖြစ်ဖို့ MY HOME ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ချမ်းသာရန်အတွက် MY HOME ကုမ္ပဏီမှတင်သွင်းသောကြမ်း ခင်းများကိုဝယ်ယူလိုပါက တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Granite Series Flooring ကြမ်းခင်းကြွေပြားများ